Apical Midzi Yakatemwa Inogona Kumutsiridza Mbatata Mbeu Kugadzirwa MuIndia - Potatoes News
Mumakumi mashanu emakore apfuura, kugadzirwa kwembatatisi muIndia kwakawedzera zvishoma nezvishoma kubva pamatani anosvika mamirioni masere nemakumi matatu nemakumi matatu nemakumi matatu nemazana mana emamiriyoni muna8.3, kuwedzerwa kunopfuura mazana mashanu muzana.
India ndiyo yechipiri pakukura mugadziri uye mutengi wembatatisi pasirese. Mumakumi mashanu emakore apfuura, kugadzirwa kwembatatisi kwakawedzera zvishoma nezvishoma kubva pamatani anosvika mamirioni masere nemakumi matatu nemakumi matatu nemakumi masere nemazana mana emamiriyoni muna8.3, kuwedzera kudarika mazana mashanu muzana.
Mumakore gumi apfuura, chigadzirwa chakawedzera kupfuura makumi matanhatu muzana nenzvimbo mbiri uye goho rinobatsira mukuwedzera. Huwandu hwenyika hwese hwembatatisi mugore ra60 hwaive hunosvika makumi maviri nemana ematani pahekita. Nekudaro, pane misiyano yakakura muhuwandu hwezvibereko mukati meIndia, kubva pamakumi matatu neshanu matani pahekita kuGujarat kusvika kumatani gumi pahekita muAssam. Pakati pezvinhu zvinoomesera zvekukura kwezvirimwa, kuwanikwa kushoma kwemidziyo yemhando yepamusoro kunoonekwa sechinhu chakakoshesa pamatanho epasi ezviyo kumabvazuva kwenyika. Mari yakakwira yembeu (maR.2017-24 pahekita), iyo inoverengera makumi mana-31.5 muzana yemutengo wese wekugadzira, changa chiri chipingaidzo chakakosha kuvarimi vadiki kuti vatore kugadzirwa munzvimbo zhinji idzi.
MuIndia, mbeu yemapatata inogadzirwa muPunjab ichishandisa michina yekudyara mbeu uye tekinoroji yekutakura uye kutakurwa kusvika kumakiromita zviuru zviviri kumatunhu ari kukura embatatari ekumabvazuva nekumaodzanyemba kweIndia. Mari yekufambisa yakakwira inotakurwa nevarimi varombo vanofanirwa kubhadhara mitengo yepamusoro yembeu futi. Kuita kuti zvinhu zviwedzere kuoma, mutengo wakakwira hautipe hunhu hwepamusoro, nekudaro zvichiita kuti zviome kuvarimi vadiki nevemumahombekombe kuisa mari yakawanda zvakadaro mukutenga mbeu izvo zvinoda kusvika hafu yemutengo wese wekugadzira. Kupararira kweaeroponic tekinoroji kwave kungogumira kuPunjab nekuda kwekukosha kwazvo kwemari uye nguva refu yekubata yemakore angangoita mana. chero kudzoka kusati kwasvika.
Kana tekinoroji yakaderera mutengo inogona kugadzirwa kuti ibudise mbatatisi yembeu pamutengo unodhura saka matunhu ekumabvazuva nekumaodzanyemba ane mukana wakakura wekuwedzera kugadzirwa kwembatatisi nekuvandudza kugadzirwa uye kudzikisa mutengo wekugadzira. Ivhu nenharaunda munzvimbo zhinji dzekumabvazuva nekumaodzanyemba matunhu akakodzera kurima mbatatisi mbeu mukati Rabi mwaka (Gumiguru-Kurume) uye mune dzimwe nzvimbo senge Hassan muKarnataka uye Koraput muOdisha inogona kurimwa mumwaka wekharif (Chikunguru-Gumiguru) zvakare. Kunyanya, iyo nzvimbo yekuchamhembe kwakadziva kumabvazuva inogona kunge iri mbatatari yembeu inotakura mbeu kuWest Bengal, Odisha neBihar.
Apical Midzi Yakatemwa
Apical yakatemwa yakatemwa michero inogona kuva mhinduro kumatambudziko eIndia akareba miriwo yembatatisi nekumisikidza kugadzirwa kwembeu nekuiunza padyo nemabhandi ekugadzira. Iyo apical cuttings iri imwe nzira kune yazvino eeroponic mbeu yekugadzira system. Ose maviri maeeroponics uye apical akacheka anosanganisira matissue tsika zvipfeko. Mune eeroponic, tishu tsika plantlets anoshandiswa kugadzira mini tubers achishandisa capital intensive aeroponic tekinoroji mune dzimba dzekuvhenekesa, nepo mune apical cuttings matissue tsika zvipfeko zvinoshandiswa samai amai mune coco makomba ekugadzira micheka.
Mumavhiki matanhatu, amai chimwe chirimwa chinogona kuwanda kuti chibudise masere masere (Mufananidzo 8) uye nhamba inoenda kunopfuura gumi neshanu muvhiki gumi nembiri. Aya akacheka anoiswa pamubhedha wembeu uye kana akadzika midzi, anoendeswa kudzimba dzimba kana nzvimbo yakavhurika yekugadzira mini tubers kana mbeu yemidziyo. Iyi tekinoroji yakaderera mutengo yakaitwa muVietnam kwemakumi emakore.
Mbatata Muriwo & Ruva Yekutsvagisa Center (PVFC) muDalat, Vietnam mutungamiri mune apical midzi yakatemwa yekugadzira mini tubers nembeu tubers. Panzvimbo ino, michero yakadzurwa inotengeswa kuvarimi vembeu mumatareyi uye inoendeswa kumunda nemabhasikoro emota uye mini marori ekugadzira mbeu dzembeu mudzimba dzemambure kana musango rakavhurika (Mufananidzo 2).
Iwo akacheka anogona zvakare kutakurwa mumaruva mabhokisi mune 3-4 matanda ane jira repurasitiki yakachena pakati pezvikamu sezvakagadzirwa neCIP (International Potato Center) masayendisiti mu Africa. Mbeu dzinotakura mbeu idzi dzinowedzerwa nekutengeswa kuvarimi sembeu mbatatisi. Vamwe varimi vanotoshandisa yakatemwa yakatemwa yakadzika kugadzira mahubhu musango. Kune vamwe varimi muVietnam vakagadza zvidiki zvetsika tsika, vanoongorora dzimba dzemamai zvidyarwa uye zvekucheka uye pakupedzisira dzimba dzematare dzekuchinjisa midzi yakatemwa yekugadzira mini tuber. Mufananidzo 3 unoratidza apical yekucheka mbatatisi yekugadzira mbeu nzvimbo yaMai Luong Thi Thu Lan muDalat, Vietnam uyo ave achishanda nzvimbo iyi kwemakore mazhinji ikozvino.
Zvichienderana neshure kwedu kweiyo envelopu kuverenga, chirimwa chakatemwa chakadzika midzi chingangoita mutengo kutenderedza Rs imwe kana kunyangwe zvishoma, uye 25,000-35,000 akacheka anodikanwa paeka. Kucheka kwega kwega kunogona kuburitsa 7-10 machubhu uye imwe nguva kunyangwe akawedzeredzwa kakapetwa ka2-3 asati atengeswa kuvarimi sembeu.
Kuratidzira uye Kuyera kweApical Yakadzika Midzi
Tiri kuumba apical midzi yekucheka chivakwa muBangaluru mukubatana neUniversity yeHorticultural Sayenzi (UHS) mukati meiyo Bengaluru kambasi. Izvi zvinosanganisira zvinyowani zvetsika yemukati izvo zvinosanganisira 20,000 mu-vitro zvirimwa zvemhando dzakakurumbira, mazana mashanu emamirimita metres tembiricha-inodzorwa dzimba dzekuvhenekera kuti ibudise zvinopfuura zviuru zana zvekucheka pamwaka uye gumi mayuniti edzimba dzetete dzenguva. cuttings yekuwedzera kuwanda musango.
Kusiyana neDalat panochekwa zvidyarwa musango rakavhurika sezvo mamiriro ekunze ari akawandisa aine vector mutoro, isu tinoronga kuakurira mukati medzimba dzemumbure dzechinguva kuti dzikwane mamiriro emuno eBangaluru neHassan. Mune mamwe mativi eIndia, zvinogona kuita kuti ukure izvi zvakatemwa musango rakavhurika seDalat. Saizvozvo, chivakwa chiri kuvakwawo muUniversity's Hassan chiteshi. Isu tinoronga kumisikidza dzinoverengeka zvivakwa muKoraput, Odisha, Central Potato Research Institute (CPRI) Shillong research station.
Zvichienderana nekuwanikwa kwemari, isu tinoronga kumisikidza zvivakwa muAssam neJharkhand. Zvivakwa zvese izvi zvichashandiswa pakuratidzira kune varimi vari kufambira mberi nemapoka evarimi pamwe neprotocol uye chirongwa chakazara chebhizinesi chekuti vatore kurimwa kwembeu dzembatatisi vachishandisa hunyanzvi uhu. Isu tinorongawo kushandisa Diki Varimi Hombe Munda (SFLF) fomati (yakamboburitswa https://indianexpress.com/article/india/agricultural-economics-how-doubling-of-farmers-income-is-possible-even-with-small-landholdings-5428084/), kuunza mapoka evarimi vadiki pamwechete kuti vatore kugadzira mbatatisi vachishandisa tekinoroji iyi.
(Samarendu Mohanty ndiAsia Regional Director, uye Sampriti Baruah, nyanzvi yezvekudya, kuInternational Potato Center, Vietnam)
Tags: MBEU DZITATUMbatatisi Mbeu Kugadzirwa MuIndiaKugadzira MuIndia
Haulm kuuraya kunokanganisa nhamba dzedanda muzvizvarwa zvembeu mbatatisi
Kiyi geni rekuzvisarudzira mu mbatatisi yakatarwa
Mitengo yekutanga yemazambane inodonha muRussia
GWONDERI WESTON ANOTSVAKA SOLUTION YEMAHARA KUTI AUNZWE HOTI Nenjodzi
Pepsico UK iri kucheka kabhoni nekushandura matinji embatatisi kuita fetireza